Dhaimondi Zvishandiso, PCD Kukuya Maturusi, PCD Kukwesha Zvishandiso - Pasi
Tarisa pane Automobile Service
Jiangxi Earth Superhard Zvishandiso ndeyeChinese nyanzvi yemhando yemadhaimani maturusi manufactory akazvipira zvigadzirwa zvedu kuvaka uye dombo indasitiri kwemakumi emakore. Mitsetse yedu inosanganisira madhayamondi nePCD ekukuya / kupukuta maturusi, Diamond Akaona Makasi, Core Drill, Floor Grinders, Resin Mapedhi ayo ese anonyanya kushandiswa mukongiri kukorobha, pamusoro pekugadzirira uye akaona kucheka pamwe neDombo Fabrication minda.
Single Row Cup vachikuya Wheel JD1-1-5
Single Row Cup vachikuya Wheel JD1-1-4
Single Row Cup vachikuya Wheel JD1-1-3
Double Row Mukombe vachikuya Wheel JD1-1-2
Isu tinopawo mabhenefiti makuru kune vese vatengi vedu, zvese zvitsva & zvinodzoka. Inzwa wakasununguka kutarisa zvimwe zvikonzero zvekuva mutengi wedu uye kuva nerinotambudza-risina ruzivo rwekutenga.
Certified mota dzemhando dzakasiyana uye saizi
Super chikwereti-kusvika-mutengo chiyero pamwe nezvakawanda zvigadzirwa
Kugaya pasi kunoreva kurapa kwekongiri / dombo / terrazzo / epoxy pasi, iyo inonyatso polisha terrazzo, kongiri yepamusoro, epoxy dhaka nhete uye epoxy yekare pasi, nezvimwe izvozvi ini ndanga ndashandisa fekitori yakananga Uriri rwekutanga ...
Kubva munaFebruary 5 kusvika 20, isu tichapemberera mutambo wezuva panguva ino perioud. Ndine urombo nezve chero inconveninet kwauri uye ndokumbirawo unzwe wakasununguka kundibata kana uine somethign chimbichimbi kuti upindure ...
① 2020 Mutambo weChirimo Vanodikanwa vatengi, Kubva Kubvumbi 5 kusvika 20, tichapemberera mutambo wechitubu panguva ino perioud. Ndine urombo nezve chero chinhu inconveninet kwauri uye ndapota inzwa wakasununguka kundibata kana uine somethign chimbichimbi kuti upindure. Ndinoda kutora uno mukana kukushuvira iwe neako ...